အခမဲ့လွတ်လပ်ရယူခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အခမဲ့လွတ်လပ်ရယူခြင်း Open access (OA) ဆိုသည်မှာ အွန်လိုင်းတွင်ဖြန့်ချိထားသော သုတေသနရလဒ်များကို အခကြေးငွေပေးရခြင်း(သို့) အခြားအခက်အခဲများ မရှိဘဲ ရရှိနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ Creative Commons license ကိုထည့်သုံး၍ ထိုသုတေသနရလဒ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြု ၍ ရကောင်းရနိုင်သည်။ အခမဲ့လွတ်လပ်ရယူခြင်းတွင် ဖြန့်ချိပြီးသား သုတေသနရလဒ်များဖြစ်သည့် peer-reviewed လုပ်ပြီးသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်ဆောင်းပါးများ၊ peer-reviewed မလုပ်ရသေးသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဂျာနယ် ဆောင်းပါးများ၊ ကွန်ဖရင့်ပေပါများ၊ စာတမ်းများ theses, စာအုပ်တွင်ပါဝင်သည့်အခန်းများ, မိုနိုဂရပ်များပါဝင်သည်။
Open access logo, originally designed by Public Library of Science. Whilst no official open access logo exists, organizations are free to select the logo style that best supports their visual language. Other logos are also in use.[ကိုးကားချက်လိုသည်]
အားသာချက်အားနည်းချက်များကို သုတေသီများ၊ ပညာရှင်များ၊ စာကြည့်တိုက်မှူးများ၊ တက္ကသိုလ်အကြီးအကဲများ၊ ထောက်ပံ့ကူညီရေးအဖွဲ့များ၊ အစိုးရလူကြီးပိုင်းများ၊ စီးပွားဖြစ်ထုတ်ဝေသူများ၊ အယ်ဒီတာများ နှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များမှ ထုတ်ဝေသူများက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အခမဲ့လွတ်လပ်အသုံးပြုခြင်းကို စီးပွားရေးမော်ဒယ်အဖြစ်ပြုလုပ်လာကြပြီး လုံးဝလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် လမ်းကြောင်းစခဲ့သည်။ PLOS and BioMed Central စသည့် ထုတ်ဝေသူတို့က အခမဲ့လွတ်လပ်အသုံးပြုခြင်းကို စတင်ခဲ့ကြသည်။ ငွေကြေးကုန်ကျမှု မရှိဘဲ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်မှူးများနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အကျိုးရှိသည်။
↑ Suber၊ Peter။ Open Access Overview။ 2017-05-19 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Schöpfel, Joachim (2013). "Degrees of secrecy in an open environment. The case of electronic theses and dissertations". ESSACHESS – Journal for Communication Studies6(2(12)): 65-86.
↑ Schwartz, Meredith (2012). "Directory of Open Access Books Goes Live". Library Journal.
↑ Markin၊ Pablo (25 April 2017)။ The Sustainability of Open Access Publishing Models PastaTipping Point။ OpenScience။ 26 April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အခမဲ့လွတ်လပ်ရယူခြင်း&oldid=411995" မှ ရယူရန်
၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၇:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၇:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။